Mon, Jul 6, 2020 at 5:13pm
थाहा पाउनुहोस धेरै सेल्फी खिच्यो भने के रोग लाग्छ ?
काठमाडौँ, २८ माघ । के तपाइलाई थाहा छ ? धेरै सेल्फी लिईरहने मान्छे एक प्रकारको रोगबाट पिडित हुन्छ । यदि तपाईपनि सेल्फीको सोखिन हुनुहुन्छ भने यो खबर सुनेर तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ । यदि कुनै व्यक्तिलाई २/३ वटाभन्दा बढी सेल्फी लिँदा पनि चित्त बुझ्दैन भने उ एउटा बिमारीको संक्रमणको शिकार भैसकेको हुन्छ । उक्त रोगको नाम हो सेल्फाइटिस । भखरै मात्र लन्डनको..
जति अल्छी त्यति नै बुद्धिमानी
एजेन्सी तपाईलाई सुन्दा आश्चर्य लाग्ला तर यो साचो कुरो हो ! यो कुरा विश्वास गर्न नै गार्हो छ तर अमेरिकी अनुसन्धानकर्ताहरूले बडो अचम्मको कुरो पत्ता लगाएको दाबी गरेका छन् । त्यो के भने, अल्छी व्यक्ति सक्रिय रहनेहरूको दाँजोमा बढी बुद्धिमानी हुन सक्छन् रे । सर्तचाहिँ के छ भने, त्यस्ता अल्छी व्यक्तिहरू बढी समय चिन्तन गर्नेचाहिँ हुनुपर्छ । यस्को मतलब तपाइको..
विश्वका अनौठा यी कानुनहरु थाहा पाएपछि तपाई पनि छक्क पर्नुहुनेछ...
सिंगापुरमा चुइगम लैजान मनाही यदि तपाई सिंगापुर जानु हुदैछ भने चुइगम लैजाने विचार हटाउनुहोस् । सिंगापुरमा लैजान नमिल्ने धेरै कुराहरु मध्ये एक चुइगम पनि रहेको छ । सिंगापुरका अधिकारीका अनुसार जथाभाबी चुइगम खाएर फाल्दा सहरलाई दुर्गन्धित त बनाउछ नै साथै यो असभ्य पनि देखिन्छ । यदि तपाईलाई दातको समस्या छ भने डाक्टरको निवेदनमा भने निकोटिन चुईगम लान पाउनुहुनेछ । डेनमार्कमा आफ्नो बच्चाको नाम..
नेपाल मै फल्यो साढे चौध किलोको एउटै काउली !
बाबियाचौर, म्याग्दी, २४ माघ । म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–२, भगवतीका एक कृषकले एउटै बोटमा साढे चौध किलोग्राम तौल भएको काउली फलाएका छन् । साबिक भगवती–७, घट्टका पदमबहादुर कार्कीले चौध किलो ५०० ग्राम तौल भएको काउली फलाएका हुन् । कार्कीले उत्पादन गरेको काउली मंगलबार तौलीँदा उक्त तौल भएको पाइएको स्थानीयवासी दलबहादुर कार्कीले बताए । कार्कीले व्यावसायिक तरकारी खेती गर्दै आएका छन् । उनले उत्पादन गरेको तरकारी..
जान्नुहोस कुन चार राशी भएका युवतीहरुमा हुन्छ गज्जबको गुण
हुन त महिलाहरुको सुन्दरताका कारण नै पुरुषहरु उनीहरु प्रति आकर्षित हुनेगरेको बताइन्छ । तर ज्योतिष बिद्द्यालाई विश्वास गर्ने हो भने १२ राशीमध्ये चार राशी भएका युवतीहरु आफ्नो सुन्दरता बिना नै कसैलाई रुझाउन सक्षम हुन्छन् । उनीहरु जुनसुकै पुरुषलाई आफुतर्फ आकर्षित गर्न सक्छन् । मिथुन राशी भएका युवतीहरुको तुलना अप्सरासँग गरिन्छ । जसले जोसुकैलाई आकर्षित गर्न सक्छन् । सुन्दरताबाहेक यी राशी भएका..
पुरुषहरुले महिलाहरुमा सबैभन्दा पहिला के हेर्छन् होला ?
पुरुषहरुले महिलाहरुमा सबैभन्दा पहिला के हेर्छन होला ? यो कुरामा कुनै दुइमत नै छैन कि महिलाहरुप्रति पुरुषहरू सहजै आकर्षित हुन्छन् । त्यसमा पनि महिलाको वक्षस्थल अर्थात् स्तनबाट पुरूषहरु झनै आकर्षित हुन्छन् । विश्वमा विभिन्न संस्थाहरुले यस सम्बन्धमा अध्ययन गरेका छन् जहाँ उनीहरुले यो कुरा पत्ता लगाएकी प्राय: पुरूषहरुको पहिलो नजर नै महिलाको स्तनमा पर्ने गर्दछ । त्यसैले पनि वक्षस्थल महिलाको..
नायिका साम्राज्ञीको ट्याटु काण्ड : यस्तो पो रैछ बास्तविकता !
आहा खबर, काठमाडौँ नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहको भर्खरै एक तस्बिर सार्बजनिक भएको छ । उक्त तस्बिरमा साम्राज्ञीको छातीमुनि एक ट्याटु देखिएको छ। सामाजिक सन्जालमा भाइरल भएको उक्त फोटो सक्कली होकी नक्कली अझै खुल्न बाकी छ। सायद यो ट्याटु नक्कली हुन सक्ने धेरैले अनुमान गरेका छन् । केहि दिन अगाडि यसै गरि नायक आर्यन सिग्देलको पनि घाटीमा गितारको ट्याटु देखिएको थियो । त्यसलगतै..
बटुवाको जुत्ता पालिस गर्दै काँग्रेसका नेताहरु, स्पोर्टस् सुज समेत टिलिक्क !
काठमाडौं, माघ १७ । नेपाली काँग्रेसका केही नेताले बटुवाको जुत्ता पालिस गरेर देशको राजनीति वृत्तमा समेत नयाँ तरंग भरिदिएका छन् । आफूहरुको सो कार्यलाई शुद्धीकरण अभियानको सुरुवात बताउँदै कांग्रेस युवा नेताले मंगलबार बिहान काठमाडौं नयाँ बानेश्वरको सडकमा जुत्ता पालिस गरेका हुन् । कांग्रेस नेताहरु धनराज गुरुङ, चन्द्र भण्डारीलगायतले सडकमा हिँडिरहेका पैदलयात्रीका जुत्ता पालिस गरिदिएका थिए । फोहोर जुत्ता पालिस गरेर सफा गरेझैं..
मोरङको बिराटनगरमा देशकै होचो मान्छे भेटिएको दाबी
पथरी, मोरङ, १७ माघ । विराटनगर–१९, बैजनाथपुर नहरटोलका २१ वर्षीय प्रकाश सरदारको उचाइ मात्र ३१ इन्च छ । देशभर रहेका होचाको उचाइलाई गुगलमा सर्च गर्दा यति उचाइको व्यक्ति अरू भेटिएनन् । तेह्र किलो वजनका प्रकाशलाई विराटनगरका प्रमुख भीम पराजुलीले घरमै गएर भेटे । उनले प्रकाश नेपालकै होचा व्यक्ति हुनसक्ने भन्दै यस्ता युवकलाई प्रोत्साहन गर्न महानगरपालिकाले मासिक रु तीन हजार आन्तरिक स्रोतबाट उपलब्ध गराउने..
मान्छेले कुकुरलाई टोकेको कहिल्यै सुन्नुभएको छ ? थाहा पाउनुस्.....
एजेन्सी । सामान्यतया कुकुरले मानिसलाई टोकेका घटनाहरु दिनहुँ सार्वजनिक हुने गर्छन् । तर मान्छेले नै उल्टै कुकुरलाई टोकिदिएको घटना भने विरलै मात्रै हुने गर्दछ । हो, हालैमात्र अमेरिकामा एकजना मानिसले कुकुरलाई टोकेपछि यो कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार बनेको छ । घटना अमेरिकाको न्यू ह्याम्पसायरस्थित बोस्कावेन कस्वेको हो । घटना घट्नुपूर्व त्यहाँको प्रहरीले सो क्षेत्रमा अन्धधुन्द फायरिंग भएको सूचना पायो । सूचना पाएलगत्तै..
तौल घटाउने जुक्ति लाउँदै ‘संसारकै मोटा व्यक्ति’ ज्वान पेड्रो फ्रेन्को
काठमाडौ, माघ ९ । ज्वान पेड्रो फ्रेन्को संसारकै सबैभन्दा मोटा व्यक्ति हुन् । गत वर्ष गिनिज बुक अफ रेकर्डले उनलाई विश्वकै सबैभन्दा मोटो व्यक्ति घोषणा गरेका थियो । २५ वर्षको उमेरमा पाँच सय ९५ किलोग्राम वजन पुगेका ज्वानको उमेर अहिले ३२ वर्ष पुगेको छ । तर, अब भने आफ्नो शरीरको तौल घटाउने दाउमा रहेका ज्वानले अप्रेसन नै गरेर भएपनि तौल घटाउने प्रक्रिया..
४० हजार व्यक्तिबाट १६ करोड डलर ठग्ने ठगलाई १३ हजार वर्षको जेल सजाय
एजेन्सी । थाइल्याण्डको एक अदालतले एकजना ठगका लागि १३ हजार २ सय ७५ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । ३४ वर्षको पुडिट किट्टीथ्राडिलोक उच्च मुनाफा प्रदान गर्ने भन्दै एउटा कम्पनी खडा गरी ४० हजार जना मानिसहरुबाट झण्डै १६ करोड डलर बराबरको रकम हात पार्न सफल भएको थियो । अवैध रुपमा ऋण प्रदान गर्ने लगायतका २ हजार ६ सय ५३ वटा ठगीका घटनामा उनी..
यस्तो छ इराकका युवतीहरू 'अधिक सुन्दर' हुनुको रहस्य...!
काठमाण्डौ पौष, २७ । इराकका महिलाहरू आफ्नो सुन्दरताको विशेष ख्याल राख्छन् । उनीहरू सुन्दरता र फिगर मेन्टेन राख्नका लागि आफ्नो आहारमा न्यूट्रीएन्ट्सले भरिपूर्ण आहार सेवन गर्न रुचाउँछन् । यसबाट उनीहरूको त्वचाको चमक बढ्छ । साथै कपालको चम्किलोपन रहिरहन्छ । स्वास्थ्यवर्धक आहारको कारणले इराकको महिलाहरूको वजन पनि नियन्त्रणमा रहन्छ । यसकारण हामी यहाँ इराकको महिलाहरू अधिक सुन्दर हुनुको ८ रहस्यमय तथ्यको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ..
यसकारण महिलाहरुको मनमा अधिकांश कुरा लामो समयसम्म अडिदैन
एजेन्सीहरु : शायद तपाईले पनि याद गर्नुभएकै होला – अधिकांश केटीमान्छेको मनमा कुरा अट्दैन भन्ने ! ‘यो कुरा अरु कसैलाई नभन्नु है !’ भनेर कसैले सुनाएको कुरा उनीहरुले कोही न कोही आफ्नो विश्वासपात्रलाई भनेरै छाड्छन् । तर, यसरी कसैको गोप्य कुरा अन्य कसैलाई बताइदिने उनीहरुको नियत भने पक्कै पनि होइन । त्यसको कारण चाहिं के भने – उनीहरुमा यस्ता कुरा एक न..
काठमाडौं, पौष ९ । अमेरिकामा एक ६ वर्षीय बालकको कमाई सुन्दा तपाई हामी सबैलाई अचम्म लाग्न सक्छ । अमेरिकामा आमाबुवाका साथमा बस्दै आएका रेयान नाम गरेका ६ वर्षीय बालकको कमाई १ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । उनले काम गरेरै यति ठूलो रकम कमाउछ भन्दा तपाई हामीलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । ती ६ वर्षीया बालकले ‘यूट्युब च्यानल’मा खेलौनाहरुको समीक्षा..
मुटु बाहिरै लिएर जन्मिएकी भ्यानेलोपीको सफल शल्यक्रिया (फोटो फिचर)
एजेन्सी, पौष ५ । अति दुर्लभ मानिने मुटु बाहिरै लिएर जन्मिएकी एकजना नवजात शिशुको चिकित्सकहरुले सफल शल्यक्रिया गरेका छन् । मेडिकल भाषामा ‘एक्टोपिया कोर्डिस’ भनिने अति दुर्लभ अवस्थाबाट आमाको गर्भाशयमै गुज्रिएकी ती शिशुको जन्मपश्चात बेलायतका ५० जना चिकित्सकहरुको टोलिले सफल शल्यक्रिया मार्फत उनको मुटुलाई शरीरभित्र राखिदिएका हुन् । ‘डेलिमेल अनलाइन’का अनुसार गर्भमा १६ हप्ता पुग्दा उनका बाबुआमाले उनीहरुको बच्चाको मुटु शरीरभन्दा माथि छातिमा..
जापानको एक रेष्टुरेन्ट जहाँ बाँदरले वेटरको काम गर्छ
एजेन्सी, मंसिर २५ । जापानमा एउटा यस्तो रेष्टुरेन्ट छ जहाँ दुईवटा बाँदरले वेटरको काम गरिरहेका छन् । रोबोटले रेष्टुरेन्टमा वेटरको काम गरेको त सुनिएको गरेकै हो तर जापानमा त बाँदरले पनि वेटरको काम गर्न सुरु गरेको छ । जापानको राजधानी टोकियोमा रहेको कायाबुकिया तावर्न नामक रेष्टुरेन्टमा दुईवटा बाँदरले वेटरको काम गरेका हुन् । रेष्टुरेन्टमा बाँदरलाई काम लगाउनका लागि रेष्टुरेन्ट मालिक काओस ओत्सुकाले..
एउटा यस्तो जोडी जसले मसानघाटको चितामा बालेको आगोलाई फेरो लगाई विवाह गरे
एजेन्सी, मंसिर १४ । भारतको गुजरातमा एक जोडीको विहेको प्रसंग सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । प्राय सबै मानिसले आफ्नो विवाह पछि सम्म पनि स्मरणीय होस् भन्ने चाहान्छ । यसै शिलसिलामा भारतमा एक जोडीले सबैलाई अचम्म लाग्ने तरिकाले विवाह सम्पन्न गरेका छन् । भारत गुजरातका वेहुला घनश्याम र बेहुली पारुलले मसानघाटमा गएर विवाह गरेका छन् । मानिसको मृत्यु भए पछि आर्यघाटमा लगिन्छ तर उनीहरुले..
भेनेजुएलामा १ बोतल दूधको मूल्य झण्डै डेढ लाख !
एजेन्सी मंसिर १० । भेनेजुएलाको महँगीको बारेमा सुन्दा तपाई हाम्रो होसहवास् नै उड्छ । त्यहाँ एक बोतल दूधका लागि समेत मानिसहरुले झण्डै डेढ लाख रुपैया तिर्नुपरेको छ । तरकारीको भाउ बढेर आकाश छुन थालेको देखेर हामी चिन्तित छौं । तर यो भेनेजुएलाको बारेमा सुन्दा त हामीलाई हाम्रो तरकारीको मूल्य धेरै सस्तो भएको जस्तो अनुभव हुन्छ । भेनेजुयला चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।..
एजेन्सी, ४ मंसिर । संसारमा विभिन्न प्रकारका विवाहका बारेमा निकै रोचक किस्साहरु बेला-बेलामा सुन्न पाइन्छ । मान्छेको विवाह हुनु वा नेपालमा भ्यागुताको बिहे हुनु निकै सामान्य हो तर रोबोटबीच विवाह हुनु अचम्मको कुरा हो । जुन २७, २०१५ मा जापानमा यस्तै अचम्मको विवाह भयो, दुइ रोबोट बीच । विवाह हुने रोबोटहरुमा बेहुलो रोबोटको नाम फ्रोइस र बेहुली रोबोटको नाम युकिरिन थियो । विवाहपछि..
८५ भाषामा गीत गाउँदै विश्व कीर्तिमानी राख्ने १२ वर्षीया बालिकाको तयारी
एजेन्सी कार्तिक २९। दुबईकी १२ वर्षीया एक बालिकामा यस्तो अद्भुत क्षमता छ । उनले ८५ भाषामा गीत गाउँन सक्छिन् । दुबइमा बस्ने सूचेता शतीस नामकी बालिका ८५ वटा भाषामा गीत गाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने तयारीमा छिन् । ७ कक्षामा पढ्ने सूचेताले अहिलेपनि सजिलैसँग ८० वटा भाषामा गीत गाउन सक्छिन् । अब चाहीँ ५ भाषा थपेर ८५ वटा भाषामा गित गाउँदै आफ्नो..
बाइकबाट पेट्रोल चोरेर पिउने यो अनौठो बाँदर !
एजेन्सी, कार्तिक २४ । जनावरहरु पनि अनौठो अनौठो प्रकृतिको भेट्न सकिन्छ । यस्तै अनौठो बाँदर हालसालै भारतको हरियाणास्थित पानीपतको एक बजारमा देखापरेको छ । उक्त बाँदर पेट्रोल चोर बाँदर हो । यसले स्थानीय व्यस्त बजारको पार्किङहरुमा पार्क गरिएका मोटरसाइकलबाट पेट्रोल चोरेर पिउने गरेको पाइन्छ । मोटरसाइकल ठड्याएको ठाउँमा गएर उसले बाइकको इन्धन पाइप दाँतले टोकेर प्वाल पारी उक्त पाइपबाट बग्ने बाइकको पूरै..
विश्वमै दुर्लभ ‘ब्लड ग्रुप’, ५६ वर्षयता जम्मा ४३ जनासँग मात्र
लन्डन, (एजेन्सी) कार्तिक ११ । सामान्यतया मानिसको रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुपका बारेमा चर्चा गर्दा ‘ए’, ‘बी’ र ‘ओ’ वा यिनै वर्गका पोजेटिभ वा नेगेटिभको नाम लिइन्छ । मानिसको रगत वर्गीकरण गर्दा रक्त समूहमा अन्यको बारेमा चर्चा समेत चलेको त्यति सुनिँदैन । यस बारेमा निकै कमलाई मात्र जानकारी हुन सक्छ की – विश्वमा अर्को रक्त समूह पनि छ । झण्डै ६ दशक..
चञ्चले वडा अध्यक्ष : अघिल्लो दिन राजपामा, भोलिपल्ट फेरि कांग्रेसतिर
बिहिवार, असोज २६, २०७४ साल
२६ असोज, सप्तरी । सप्तरी जिल्लस्थित बिष्णुपुर गाउँपालिका वडा नम्बर ६ का वडा अध्यक्ष बहादुर सदा मंगलबार राष्ट्रिय जनता दल ‘राजपा’मा प्रवेश गरे । अघिल्लो दिसम्म राजपाका अनुयायी यी नेता बुधबार फेरि कांग्रेस भएका हुन् । कांगे्रस सप्तरीका सभापति दिनेश कुमार यादवले सदालाई माला अविर लगाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए । हुन त अहिले देशमा एक पार्टीबाट अर्काे पार्टीमा प्रवेश गर्नेको लहर..
९८ वर्षको बुढो उमेरमा सेकेण्ड डिभिजनमा ‘एमए’ पास
बिहार । भारतका एक ९८ वर्षीय एक वृद्धले आफ्नो उमेरलाई समेत जितेर सबैलाई चकित पारिदिएका छन् । विभिन्न विज्ञानका सिद्धान्तहरुलाई समेत चुनौती दिदै बिहारका राजकुमार वैश्यले आफ्नो बुढो उमेरका बाबजुद सजिलैसँग स्नातकोत्तर उत्तीर्ण गरेका हुन् । उनको यस उपलब्धीले मानिसमा बुढ्यौलीका कारण स्मरण शक्ति कम हुँदै जान्छ भन्ने तथ्यलाई समेत दह्रो चुनौती पेश गरिदिएको छ । बिहारका ९८ वर्षीय राजकुमार वैश्यले पटनास्थित नालन्दा..
जिन्स प्यान्टको दाहिनेपट्टी हुने सानोखल्तीको काम के होला !
बुधबार, असोज ४, २०७४ साल
-एजेन्सी जिन्स प्यान्टको दाहिनेपट्टीको खल्तीमाथि हुने सानो खल्तीलाई त अवश्य पनि सबैले याद गर्नुभएकै होला । तलपट्टी त्यत्रो ठूलो खल्ती हुँदाहुँदै फेरी किन सानो खल्ती राखिएको होला? अब त्यसलाई गोप्य खल्ती हो भनौँ भने ठ्याक्कै देखिने ठाउँमा नै छ । जिन्स प्यान्टको फेसन आउन थालेदेखि नै मानिसहरूले उक्त सानो खल्तीलाई धेरै कामको लागि प्रयोग गर्दै आएका छन् । गितार बजाउनेहरू अधिकांशले यो..
मोटी महिलाका लागि अमेरिकाको लास–वेगासमा अनौठो ब्युटीपार्लर
एजेन्सी । विशेषगरी महिलाहरुका लागि सुन्दरता निकै महत्वको विषय हो । सुन्दरताका हिसाबले मोटो हुनु महिलाहरुका लागि अभिशाप नै मानिन्छ । तर, संसारमा जुन सुकैै पनि समस्याको समाधान भेट्न सकिन्छ । मोटा महिलाहरुले कपडा, स्यान्डलदेखि ब्युटीपार्लरमा मेकअप गराउनसम्म धेरै खाले समस्याको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि २ सय २६ केजी तौल हुने महिलालाई सामान्यतया आम केटीले प्रयोग गर्ने लुगा जुता (स्यान्डल) फिट..
हामीले सुत्दाखेरी देख्ने सपना अक्सर समय अनुशार फरक–फरक हुने गर्छ । सपनाको विषयलाई लिएर बैज्ञानिकहरु समेत आ–आफ्नै धारणा प्रस्तुत गर्छन् । अझ भनौं, कतिपय बैज्ञानिक आविष्कार त आफूले सपना देखेको आधारमा नै गर्न सफल भएको बैज्ञानिकहरुको तर्क रहँदै आएको छ । त्यस्तै, सपनाले आगामी समयमा हुने राम्रो वा नराम्रो घटनाको बारेमा पहिला नै जानकारी दिन्छ । तर, दुःखको कुरा के..
सुर्खेतमा स्यालले टोकेर १८ जना घाइते
सुर्खेत – पूर्वी सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकामा स्यालको टोकाइबाट १८ जना घाइते भएका छन्। गुर्भाकोट नगरपालिका–४ को मिलनचोक, आँप खोली र बाघखोरमा घरमै बसिरहेको अवस्थामा स्थानीयवासीलाई स्यालले टोकेको हो। बुधबार साँझ नौजना र विहीबार दिउँसोसम्म नौजनालाई टोकेको स्वास्थ्य चौकी सहारेका प्रमुख किरण वलीले जानकारी दिए। घाइतेलाई रेबिजविरुद्ध दिइने खोप स्थानीयस्तरमा दिइएको प्रमुख वलीले बताए। स्यालले टोक्दा लगाउने इम्युनोग्लोमिन भ्याक्सिन काठमाडौँको टेकु अस्पतालमा..
भ्वाइलिन बजाउँदै आकाशबाट नाङ्गै हामफाल्ने ‘ग्लेन’
कुनै–कुनै मनिसको चाहना पनि अचम्मकै हुनेगर्छ । हो, हामी यहाँ कुरा गर्दै छौं –अष्ट्रेलियाका संगीतकार ग्लेन डोनेलीको । जसले केही अघि भ्वाइलिन बजाउँदै हवाइजहाजबाट नांगै हाम फालेर सबैलाई अचम्मित तुल्याएका थिए । हुनत यसो गर्ने उनको पहिलादेखिकै चाहना भएतापनि बल्ल अहिले आएर उनले यो पूरा गरेका हुन् । ग्लेनले आफ्नो ३० औं जन्मदिनका अवसरमा उनले निर्वस्त्र स्काइडाइभ गर्ने निधो गरेका थिए..
Results 603: You are at page 20 of 21